Ventura Air Services dia manampy an'i Cessna Citation Excel voalohany amin'ny mari-pahaizana momba ny sata
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ventura Air Services dia manampy an'i Cessna Citation Excel voalohany amin'ny mari-pahaizana momba ny sata
Ny fiaramanidina vaovao dia taratry ny tanjaky ny sehatra fiaramanidina tsy miankina sy ny tanjon'ny fanitarana mahery vaika an'ny Ventura Air Services
Cessna Citation 560XL no jet manerantany malaza indrindra
Ny Citation dia mahazaka mpandeha fito ary manana halavirana 1,657 kilometatra
Cessna Citation 560XL dia manana hafainganam-pandeha an-tampon'ny 487 kilometatra isan'ora
Ventura Air Services dia faly manambara ny fanampiana ny Cessna Citation voalohany
Excel 560XL mankany amin'ny mari-pahaizana momba ny sata. Ventura koa dia nanampy Citation Excel 560XL'sa fanampiny roa natomboka tamin'ny telovolana faharoa 2021 ho ampahany amin'ny fanitarana ny fiaramanidina miorina ao amin'ny Airport Airport any Farmingdale, New York. Tamin'ny volana novambra 2020, nanambara voalohany i Ventura ny fampidirana ny Citation voalohany sy ny Bombardier Challenger 604 roa voalohany, izay natomboka tamin'ny telovolana faha-2020.
Ny midsize Cessna Citation 560XL no fiaramanidina mpiompy malaza eran'izao tontolo izao noho ny fiononany, ny fahamendrehana amin'ny fandefasana azy ary ny lanjan'ny entana entin'ny sokajy. Ny Citation dia afaka mandray mpandeha fito ary manana elanelam-potoana maherin'ny 1,657 kilometatra, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha ambony 487 kilometatra isan'ora.
Ny Ventura Citation 560XL's sy Bombardier Challenger 604 dia manasongadina fampitaovana marobe, ao anatin'izany ny Wi-Fi maimaimpoana. Ireo fiaramanidina vaovao dia maneho ny tanjaky ny sehatra fiaramanidina tsy miankina ary Ventura Air Services'tanjona fanitarana mahery vaika, mifantoka amin'ny vidiny isa.